पूजाकाे बिकिनी अवतार::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पूजाकाे बिकिनी अवतार
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, मंसिर २, २०७३
अभिनेत्री पूजा शर्मा खुल्दै गएकी छिन् । मतलव, उनले आफूलाई ‘हट’ रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेकी छिन् । ‘थ्री लभर्स’, ‘मधुमास’, ‘मेरो बेस्ट फ्रेन्ड’ र ‘अझै पनि’ फिल्ममा अभिनय गर्दासम्म पनि खासै चर्चा पाउन नसकेकी उनले गत वर्ष रिलिज भएको ‘प्रेमगीत’बाट भने राम्रै परिचय बनाइन् ।
हिमालय टेलिभिजनमा ‘पार्ट टाइम’ कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत हुँदै उनले सुरेशदर्पण पोखरेलको थ्री लर्भस फिल्ममा सहनायिका भई अभिनय गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनमा हिरोइन बन्ने चाहना उत्कट भएको थियो । उनको सपना पूरा गरिदिए, निर्देशक सुदर्शन थापाले ।
थापाकै फिल्ममा निरन्तर अभिनयरत पूजा प्रेमगीतको ‘जब पुग्छु रिभर साइड’ बोलको गीतमा ग्ल्यामरस रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् । अहिले, उनी अझै ‘हट’ बनेकी छिन् । थाइल्यान्ड घुम्न गएकी उनले समुद्री किनारमा बिकिनी लगाएर फोटो खिचाइन्, र फेसबुकमा ‘जब पुग्छु जेम्स बोन्ड आइसल्यान्ड’ भन्दै पोस्ट गरिन् । उनले फेसबुकमा तस्बिर राखेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । पूजाको यो ‘हट’ अवतारलाई उनका शुभचिन्तकले भने उत्ति साह्रो मन पराएका छैनन् । के अब फेसबुक फ्रेन्डका कमेन्टलाई मनन गर्लिन् त पूजाले ?
दयाहाङको ‘भैरे’ रिलिज हुने मिति तोकियो
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन पापड बेच्न सडकमा
देश-विदेशको बक्स अफिसमा हंगामा मच्चाएको ‘पद्मावत’ को कमाई कति ?